C/qaasim Salaad Xasan oo ka hadley mowqofkiisa ku aadan Ciidamada Safka hore – SBC
C/qaasim Salaad Xasan oo ka hadley mowqofkiisa ku aadan Ciidamada Safka hore
Ka dib markii dhowaan ciidamo ka socda dowladaha Safka hore ee Deriska La ah Soomaaliya ay gudaha u soo galeen qaar ka mid ah gobolada Bartamaha iyo Koonfurta dalka, laguna arkay ciidamada dowladahaasi oo dhexlugeynaya ciida Soomaaliya ayaa waxaa arinkaasi sharci daro ku tilmaamay Madaxweynihii hore ee Somalia C/qaasim Salaad Xasan.
Dr C/qaasim Salaad Xasan ayaa ku sheegay danaha dowladahaasi ay u soo galeen Soomaaliya ay tahay mid dhaqaale ay ku raadsanayaan iyagoona haminaya in lacago lagu siiyo arinkaas si ay deegaanadooda ugu horumariyaan.
“Ciidamda Safka hore hora loo diiday, in ay soo galaan ciida Somaliyana waa mid ah dhaqaalo ku raadinayaan, taana waa mid gef ku ah Umada Soomaaliyeed iyo qarankooda” ayaa ka mid ahaa hadalada Madaxweynihii hore ee Somalia C.qaasim Salaad Xasan.
Waxa uu intaasi ku daray Dr C/qaasim in Qaramada Midoobay ay tahay in ciidamo gaar ah u soo qorsheeso Soomaaliya, isagoona u sheegay in aanay ogolaaneyn ciidamo safka hore oo Soomaaliya soo gala.
Dr C/qaasin Salaad Xasan Iminka waxa uu ku suganyahay gudaha Dalka Masar gaar ahaan Caasimada dalkaas, waxaana hadalkiisu imanayaa xili dhowaan ay gudaha u soo galeen qeybo ka mid ah Somaliya Ciidamo ka kala socda dowladaha Kenya iyo Itoobiya .
Asalaama calaykum c/qaasin salaad waxa 100% uu kafiican yahay intii siyaad barre dhacay kuwii naloo soo dhisay wax soomaalinimo udanqanaya asagaa jira intii madax soomartay waxaan shacabka soomaaliyeed kulatalinayaa inay dhisaan urur ay ku midaysanyihiin dhamaan aqoonyahanada soomaaliyeed laguna dabaqabanayo dalka iyo dadka soomaaliyeed waana in loomidoobaa jaranjarada la inoo soomarayo ee ah mushrikiinta kuwa horbooda gumaystayaasha kuwa maamulgoboleedyada qaybi oo xukun gumaysigu horjoogayaasha uga dhigtay
Maxammed Xaajinuur Maxammed says:
Qofkaan hadalka aad ka soo tebiseen ood mas-uulka u haysataan annaga wuxuu noola mid yahay :ODAYAASHA HAWIYE
nimanka la baxay sida:TIMAJARE SARE XAAD,CIISE DALABEY & ABUU MOORYAAN AXMED DIRIYE;kufna uma aha in aaynu hadal kagu gurro & in uu Soomaaliya ka hadlotoonna.
Xirsi Deniyow,RAH baa waxay jeer tiri:HADDII BIYO WAX TARAYAAN ANIGA AYAY BARI IGA SOO SAARILAHAAYEEN, sidoo kale haddii Al Shabaabnimo & dadka ka dambeeyaa aay wax
wanaag ah leeyihiin,sheegatada Dottoorrada,Aqoonyahanka,
Salaaddiinta & Odaydhaqameedyada Hawiye ayay meel ka soo saarilahayd (acnii kuwaas ayaa tixraac noogu filan ee waxba DHIDAR YEY ABTIGEED AH hannoo xayeesin).